umzekelo weqhinga lokuvavanya i-agile template
Eyona Agile Isicwangciso sovavanyo se-Agile soMzekelo
Isicwangciso sovavanyo se-Agile soMzekelo
Isicwangciso sovavanyo lwe-Agile
Kwimeko agile, apho sisebenza khona kwi-sprints emfutshane okanye kwi-iterations, i-sprint nganye ijolise kwiimfuno ezimbalwa okanye kumabali abasebenzisi, ke kuyindalo ukuba amaxwebhu asenokungabi kangako, ngokwamanani kunye nomxholo.
Injongo yoxwebhu lwesicwangciso sovavanyo lwe-agile kukudwelisa ezona ndlela zilungileyo kunye nolunye ulwakhiwo olunokulandelwa ngamaqela. Khumbula, i-agile ayithethi ukuba ayicwangciswanga.
Apha, sijonga isampulu yoBuchule boVavanyo lwe-Agile kunye nokuba ubandakanya ntoni kuxwebhu.
Isicwangciso sovavanyo sihlala sinesitetimenti semishini esinokunxulumana neenjongo kunye neenjongo zeshishini.
Isiteyitimenti somsebenzi esiqhelekileyo sinokuba:
Ukuhambisa rhoqo iSoftware eSebenzayo ehlangabezana neemfuno zabaThengi _by _Ukunikezela ngeNgxelo ekhawulezileyo _and _Defect Prevention, endaweni yokuKhangela ukuKhangela.
Akukho khowudi enokubhalwa ebalini de siqale sichaze indlela esamkelekileyo ngayo / iimvavanyo
Ibali alinakuthathwa njengegcweleyo de kuphumelele iimvavanyo zalo zokwamkelwa
Kwincwadi yoBuchule boVavanyo lwe-Agile, ndingabandakanya ukukhumbuza wonke umntu malunga nokuQinisekiswa koMgangatho
I-QA iseti yemisebenzi ejolise ekuqinisekiseni ukuba iimveliso ziyanelisa iimfuno zabathengi ngendlela ethembekileyo, ethembekileyo.
Kwi-SCRUM (i-agile) i-QA luxanduva lomntu wonke, hayi abavavanyi kuphela. I-QA yiyo yonke imisebenzi esiyenzayo ukuqinisekisa umgangatho olungileyo ngexesha lokuphuhliswa kweemveliso ezintsha.
NGOBA: Ukuqinisekisa ukuba ikhowudi iphuhliswe ngokuchanekileyo
I-WHO: Abaphuhlisi / abaCwangcisi bobugcisa
NINI: Nje ukuba kubhalwe ikhowudi entsha
APHO: Ingingqi ye-Dev + CI (icandelo lokwakha)
NJANI: Zenzekelayo, Junit, TestNG, PHPUnit
Uvavanyo lwe-API / lweNkonzo
NGOBA: Ukuqinisekisa unxibelelwano phakathi kwamacandelo kuyasebenza
INTONI: Iinkonzo zewebhu ezintsha, izixhobo, abalawuli, njl
NINI: Ngokukhawuleza nje ukuba i-API entsha iphuhlisiwe kwaye ilungile
NJANI: Zenzekelayo, I-Soap UI, iKlayenti yokuPhumla
NGOBA: Ukuqinisekisa ukuba ulindelo lwabathengi luyafezekiswa
I-WHO: Umthuthukisi / i-SDET / iNcwadi yeQA
INTONI: Ukuqinisekisa uvavanyo lokwamkelwa kumabali, ukuqinisekiswa kweempawu
NINI: Xa inqaku lilungile kwaye iyunithi ivavanyiwe
APHO: I-CI / imeko yoVavanyo
NJANI: Ngokuzenzekelayo (Ikhukhamba)
Ukuvavanywa kwenkqubo / ukuVavanywa kwakhona kwe-UAT
NGOBA: Ukuqinisekisa ukuba yonke le nkqubo isebenza xa idityanisiwe
I-WHO: I-SDET / iNcwadi yeQA / uMhlalutyi woShishino / uMnini weMveliso
INTONI: Ukuvavanywa kwemeko, Ukuhamba komsebenzisi kunye nohambo oluqhelekileyo loMsebenzisi, ukuSebenza kunye nokuvavanywa kokhuseleko
NINI: Xa kuvavanywa ukwamkelwa kugqityiwe
APHO: Indawo yokuGada
NJANI: Uvavanyo oluzenzekelayo (iWebdriver)
Eyona nto ixhaphakileyo yokusilela kwesoftware kungenxa yeemfuno ezingacacanga kunye notoliko olwahlukileyo lweemfuno zamalungu eqela.
Amabali abasebenzisi kufuneka abelula, amafutshane kwaye angacacanga. Njengesikhokelo esihle, kungcono ukulandela imodeli ye-INVEST yokubhala amabali abasebenzisi.
Ibali elifanelekileyo lomsebenzisi kufuneka:
Mna ndixhomekeke (kubo bonke abanye)
U-N enokutsalwa (hayi ikhontrakthi ethile yeempawu)
V inokubakho (okanye nkqo )
NGU iyakhuthaza (kufutshane nokusondela)
S Ivenkile (ukuze ilingane ngaphakathi kwento eyenziwayo)
T ezinokuthenjwa (ngokomgaqo, nokuba alukho uvavanyo lwalo okwangoku)
Le fomathi ilandelayo kufuneka isetyenziselwe ukubhala amabali abasebenzisi
Kubalulekile ukuba ungalibali icandelo 'loNcedo', njengoko wonke umntu kufuneka elazi ixabiso alongezayo ngokuphuhlisa ibali.
Ibali ngalinye loMsebenzisi kufuneka liqulathe iikhrayitheriya zokwamkelwa. Le yeyona nto ibaluleke kakhulu ekhuthaza unxibelelwano namalungu ahlukeneyo eqela.
Iikhrayitheriya zokwamkelwa kufuneka zibhalwe ngaxeshanye ibali lomsebenzisi liyile kwaye kufuneka lingeniswe emzimbeni webali. Zonke iikhrayitheriya zokwamkelwa kufuneka kuvavanywe.
Inkqubo nganye yokwamkelwa kufuneka ibe nenani lovavanyo lokwamkelwa eliboniswe njengemeko ebhalwe kwifomathi yeGherkin, o.k.t.
Iindibano zocweyo zamabali / uCwangciso lweSprint
Kwindibano nganye yamabali, wonke umntu kwiqela ufunda malunga neenkcukacha zamabali ukuze abaphuhlisi kunye ne-QA bazi ubungakanani bomsebenzi. Wonke umntu kufuneka abe nokuqonda okufanayo malunga nokuba ibali lingantoni.
Abaphuhlisi kufuneka babe nokuqonda okuhle kweenkcukacha zobuchwephesha ezibandakanyekayo ekuhambiseni ibali, kwaye iQA ​​kufuneka yazi ukuba ibali liza kuvavanywa njani kwaye ukuba kukho naziphi na izithintelo zokuvavanya amabali.
Kwiindibano zocweyo zamabali, I-PO, BA, Dev, kunye neQA kufuneka zibandakanyeke.
Iimeko (ezifanelekileyo, ezingavumelekanga kunye neemeko zecala) kufuneka zicingelwe (i-QA inokongeza ixabiso elikhulu apha ngokucinga ngokungacacanga malunga nebali) kwaye ibhalwe phantsi kwiifayile ezibonakalayo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ziimeko (ngakumbi kunayo nayiphi na enye into) eya kuthi iveze iziphene xa kuvavanywa imveliso, kungoko umgudu kunye nexesha elichithwe kulo msebenzi, iziphumo ezilungileyo ekugqibeleni.
Ngenxa yokuba uninzi lweziphene lubangelwa ziimfuno ezingacacanga nezingacacanga, lo msebenzi uya kunceda nokuthintela ukumiliselwa kokuziphatha okungalunganga njengoko wonke umntu kufanele ukuba aliqonde ibali.
Kwangokunjalo, kwiintlanganiso zokucwangciswa kwe-sprint, uqikelelo olunikezelwe ebalini kufuneka lubandakanye umzamo wokuvavanya kwaye hayi nje umzamo wokufaka iikhowudi. I-QA (incwadana kunye nokuzenzekelayo) kufuneka ibekhona kwiintlanganiso zokucwangcisa i-sprint ukubonelela ngoqikelelo lokuvavanywa kwebali.
Xa uphuhliso luqala, ikhowudi yemveliso entsha kunye / okanye ukuguqulwa kwikhowudi yelifa kufuneka ixhaswe ngu iimvavanyo zeyunithi ezibhalwe ngabaphuhlisi kunye nokuphononongwa ngoontanga ngomnye umphuhlisi okanye i-SDET enezakhono.
Nakuphi na ukuzibophelela kwindawo yokugcina ikhowudi kuya kubangela ukwenziwa kovavanyo lweyunithi kwiseva yeCI. Oku kunika indlela yokuphendula ngokukhawuleza kwiqela lophuhliso.
Uvavanyo lweyunithi luqinisekisa ukuba inkqubo isebenza kwinqanaba lobuchwephesha kwaye akukho zimpazamo kwilogic.
Njengomphuhlisi, ziphathe ngokungathi awunayo iQA kwiqela okanye kumbutho. Kuyinyani ukuba ii-QAs zinengqondo eyahlukileyo kodwa kuya kufuneka uvavanye ngokusemandleni akho.
Ucinga ukuba ugcina ixesha ngokukhawuleza udlulela kwibali elilandelayo, kodwa enyanisweni, xa kufunyenwe isiphene kwaye sixeliwe, kuthatha ixesha elide ukulungisa umba kunokuchitha imizuzu embalwa uqinisekisa ukuba inqaku lisebenza kakuhle.
Nayiphi na ikhowudi entsha kunye / okanye ukuphinda usebenzise ikhowudi yelifa kufuneka ube novavanyo olufanelekileyo lweyunithi oluya kuba yinxalenye yovavanyo lokuhlengahlengiswa kweyunithi.
Uvavanyo lokwamkelwa oluzenzekelayo kunye novavanyo olungasebenziyo
Uvavanyo lokwamkelwa oluzenzekelayo lubandakanya kuvavanyo lokuHlanganisa kunye noVavanyo lweNkonzo kunye novavanyo lwe-UI olujolise ekuqinisekiseni ukuba isoftware isebenza kwinqanaba elisebenzayo kwaye iyahlangabezana neemfuno zomsebenzisi kunye nokubalulwa.
Uvavanyo lokwamkelwa oluzenzekelayo ludla ngokubhalwa ngolwimi lwe-Gherkin kwaye lwenziwe kusetyenziswa isixhobo se-BDD esifana nekhukhamba.
Khumbula : Ayizizo zonke iimvavanyo ekufuneka zenziwe ngokuzenzekelayo!
Kuba ezi mvavanyo zihlala zifuna unxibelelwano ngaphezulu kwe _ _ + _ |, kufuneka zenziwe kwisicelo esisetyenzisiweyo, endaweni yokuba ziqhubeke njengenxalenye yokwakha.
Uvavanyo olungasebenziyo ezinje ngovavanyo lokuSebenza kunye noKhuseleko zibaluleke ngokulinganayo njengeemvavanyo ezisebenzayo, ke ngoko kufuneka zenziwe kusetyenziso ngalunye.
Uvavanyo lwentsebenzo kufuneka lukhangele ukusebenza kweemetriki kwinto nganye yokuqinisekisa ukuba akukho kuhla kwentsebenzo.
Uvavanyo lokhuseleko kufuneka luqwalasele ubungozi kwezokhuseleko obusisiseko I-OWASP
Kubalulekile ukuba le ibe yinkqubo ezenzekelayo ngokupheleleyo enesondlo esincinci kakhulu ukuze ufumane isibonelelo sokuthunyelwa okuzenzekelayo. Oku kuthetha ukuba akufuneki kubekho ukusilela kuvavanyo lwexeshana, imiba yeskripthi sokuvavanya, kunye nemeko ephukileyo.
Ukusilela kufanele kubangelwe kuphela kukungaziphathi kakuhle kwekhowudi endaweni yemicimbi yeskripthi, ke ngoko naluphi na uvavanyo olungaphumelelanga olungabangelwa kukusilela okwenyani kufuneka lulungiswe kwangoko okanye lususwe kwipakethe ye-automation, ukuze bakwazi ukufumana iziphumo ezingqinelanayo.
Ungalindelanga ukufumana iziphene ezininzi. Injongo yabo kukubonelela ngengxelo yokuba asiphulanga ukusebenza okukhulu. Kuya kubakho isixa esincinci kakhulu sovavanyo lokubuyela umva kwesandla.
Ipakethe yomsi-akufuneki ibe ngaphezulu kwemizuzu eli-15
Le pakethi iqulethe kuphela amanqanaba aphezulu okusebenza ukuze uqiniseke ukuba isicelo sizinzile ngokwaneleyo ukuba siqhubekeka okanye sivavanywa.
Umzekelo, kwiwebhusayithi yeCommerce, iimvavanyo ezibandakanyiweyo kule paki zinokuba:
Ukudalwa kweakhawunti / ukungena kweakhawunti
Ukupakisha okupheleleyo okupheleleyo- akufuneki kungabikho ngaphezu kweyure enye
Le pakethi iqulethe i-regression suite epheleleyo yovavanyo kwaye iqulethe yonke enye into engafakwanga kwipakethe yomsi.
Apha, injongo kukufumana ingxelo ekhawulezayo ngeseti enkulu yovavanyo. Ukuba impendulo ithatha ngaphezulu kweyure enye, ayikhawulezi. Nokuba kunciphise inani lovavanyo ngokusebenzisa ubuchule bovavanyo olwenziwe ngambini, yenza iipakethi zovavanyo ngokusekwe kumngcipheko okanye usebenze iimvavanyo ngokuhambelana.
UAT kunye noVavanyo lokuHlola
Akukho sizathu sokuba i-UAT kunye nokuvavanywa kokuhlola kungasebenzi ngokuhambelana novavanyo lokwamkela oluzenzekelayo. Emva kwayo yonke loo nto, yimisebenzi eyahlukeneyo kwaye ijolise ekufumaneni imicimbi eyahlukeneyo. Injongo ye-UAT kukuqinisekisa ukuba amanqaku aphuculweyo enza ingqiqo yeshishini kwaye aluncedo kubathengi.
I-PO (Umnini weMveliso) kufuneka aqhube iiMvavanyo zoKwamkelwa koMsebenzisi okanye iiMvavanyo zoKwamkelwa kweShishini ukuqinisekisa ukuba imveliso eyakhiweyo yile nto yayilindelekile kwaye iyahlangabezana nokulindelwe ngumsebenzisi.
Uvavanyo lokuvavanya kufuneka lujolise kwimeko yomsebenzisi kwaye kufuneka lufumane iimpazamo ezilahlekileyo ngokuzenzekelayo. Uvavanyo lokuvavanya akufuneki lufumane iibhugi ezingenamsebenzi, endaweni yoko kufuneka lufumane imiba efihlakeleyo.
Nje ukuba yonke imisebenzi engentla igqityiwe kwaye kungabikho miba ifunyenweyo, ibali lililo Yenziwe!
Oku kungasentla zezinye izikhokelo malunga nokuba kungabandakanywa ntoni kuXwebhu lweSicwangciso soVavanyo lwe-Agile. Ngokucacileyo oku kufuneka kulungiselelwe iimfuno zombutho wakho, kodwa ngethemba lokuba le template inokukunceda ekwenzeni uxwebhu lwakho lwesicwangciso se-Agile Test.
I-lg v10 vs s7 umda
Ngaba uGoogle uphuhlisa inguqulelo ye-Android yeApple kunye neeapos zokufumana inethiwekhi yam?
I-Apple iPhone 6s vs iPhone 6
Uyithelekisa njani iJSON kwiPython
Zeziphi iimodeli ze-iPhone kunye ne-iPad eziza kufumana i-iOS 8? Iiposti ze-Apple iinkcukacha zokukhutshwa kwe-8
Idili: Gcina ukuya kuthi ga kwi-100 leedola (i-30% icinyiwe) kumda we-Samsung Gear S3